Stampnote, Lifeless Planet, Total Video Player na ngwa ndị ọzọ na egwuregwu na ere maka obere oge | Esi m mac
Stampnote, Lifeless Planet, Total Video Player na ngwa ndị ọzọ na egwuregwu na ere maka obere oge
Lee obi ụtọ anyị nwere! Eziokwu? N’ime awa ole na ole, ọtụtụ n’ime anyị ga-ewelite ala anyị n’oche anyị wee chefuo ọrụ na ọtụtụ ọrụ anyị na-arụ kwa ụbọchị maka ụbọchị abụọ dị ogologo nke, ka osi dị, ga-adị mkpụmkpụ. Mana ka ị na-anụ ụtọ ha n'ụzọ zuru oke, taa na Soy de Mac, ewetara m gị nhọrọ nke Egwuregwu na ngwa ndị a na-akwụ ụgwọ, mana ugbu a ị nwere ike ị nweta ego mbelata, na ọbụna ụfọdụ n'ime ha n'efu.
Mana dika m na-achọkarị ịdọ aka ná ntị, echefula nke ahụ onyinye ọ bụla na ngwa na egwuregwu na Mac App Store bụ maka obere oge. Naanị ihe nwere ike ịkwado gị bụ na nkwalite na mbenata dị ire n'oge a na-ebipụta post a, agbanyeghị, anyị amaghị ogologo oge ha ga-adị, data na n'ọtụtụ ọnọdụ, ndị mmepe anaghị eme ọkwa ma ọ bụ ọkwa ọ bụla . Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwa ọ bụla, jiri ohere a mee ngwa ngwa, na emesịa ị ga-enwe oge iji jiri ya kpọrọ ihe yana ọbụnadị weghachite wee nweta ego gị ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya.
1 Chess nke China
2 Stampnote - Edeturu Timestamped, Akwụkwọ ndekọ ọtụtụ, Dropbox Sync, CSV Mbupụ
3 Ndụ Na-adịghị Ndụ Na-adịghị Ndụ
4 Total Video ọkpụkpọ
5 Nnukwu Foto Watermark
Chess nke China
Anyị na-amalite na Chess nke China nke, dika inwere ike igosiputa ya site na aha ya, abughi ihe kariri a cheesi cheesi. Ma cheesi bụ egwuregwu chọrọ ọrụ uche siri ike, yana nnukwu atụmatụ iji kwatuo onye iro gị, yabụ ọ ga-abụ egwuregwu nke Ọ ga - enyere gị aka ikwughachi batrị gị n’oge izu ụka n'ụzọ dị ọchị.
Chess nke China Ọ nwere a mgbe price nke 4,99 euro na Mac App Store Otú ọ dị, ugbu a, i nwere ike inwe egwuregwu a na 80% ego maka naanị 0,99 euro maka obere oge
Stampnote - Edeturu Timestamped, Akwụkwọ ndekọ ọtụtụ, Dropbox Sync, CSV Mbupụ
Ihe odide stampụ Ọ bụ ndetu na-ewere ngwa n'usoro oge na Mac gị nke bara uru karịsịa maka "usoro oge na nhazi oge maka okwu ikpe, akwụkwọ ọkwọ ụgbọ ala, ndekọ ọkwọ ụgbọ ala, ịdebe ihe ị rụrụ na ọrụ gị, ịchọọ awa ndị nwere ike ịba uru, ma ọ bụ idebe ihe ndetu", nke mere ka ọ bụrụ "ezigbo maka ngosi ma ọ bụ nzukọ ọgbakọ»
Ke adianade do, ọ na-enye ohere mmekọrịta site Dropbox mere na i nwere ndetu gị dị na gị iOS ngwaọrụ.
Ihe odide stampụ Ọ nwere ọnụahịa oge niile nke euro 4,99 na Mac App Store n'agbanyeghị, ugbu a ị nwere ike nweta ngwa a na mbelata 20% maka euro 3,99 maka obere oge
Stampnote - Edeturu Timestamped, Akwụkwọ ndekọ ọtụtụ, Dropbox Sync, CSV Mbupụ3,99
Ndụ Na-adịghị Ndụ Na-adịghị Ndụ
N'ike mmụọ nsọ site na akụkọ akụkọ sayensị nke gbasoro n'oge oge Agha Nzuzo, na Ndụ Na-adịghị Ndụ Na-adịghị Ndụ You ga-abanye njem dị egwu mgbe, na-achọ ndụ na mbara ala dị anya, ị ga-ahụ obodo Russia gbapụrụ agbahapụ.
Ihe ndị bụ isi gụnyere:
Nyochaa gburugburu ebe iri abụọ na puru iche na ikuku dị na mbara ụwa sara mbara ma dịkwa aghụghọ.
Soro nwa agbọghọ dị omimi ka ọ na-eduzi gị n'ụzọ dị egwu na ụdị ndụ dị egwu.
Nyochaa nchọpụta dị ịtụnanya nke obodo Russia gbahapụrụ agbahapụ.
Nwee akụkọ na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ site na eserese ndị mara mma na ebe nkiri sinima.
Lifeless Planet Premier Edition bụ egwuregwu sitere na akụkọ akụkọ sayensị nke gbasoro n'oge Agha Nzuzo gburugburu gburugburu ọchịchọ mmadụ ịchọpụta ohere.
Ndụ Na-adịghị Ndụ Na-adịghị Ndụ Ọ nwere ọnụahịa oge niile nke 19,99 euro na Mac App Store n'agbanyeghị, ugbu a ị nwere ike nweta egwuregwu a dị oke egwu na mbelata 50% maka naanị 9,99 euro maka obere oge
Total Video ọkpụkpọ
Total Video ọkpụkpọ Ọ bụ ọkpụkpọ vidiyo maka Mac nke anyị agwala gị na Soy de Mac n'ọtụtụ oge. Ọ na-arụ ihe niile video na ọdịyo formats na nwere tọn nke ọzọ atụmatụ dị ka listi ọkpụkpọ.
Total Video ọkpụkpọ Ọ nwere ọnụahịa gara aga nke euro 4,99 na Mac App Store n'agbanyeghị, ugbu a ị nwere ike nweta ya na 80% ego maka naanị 0,99 euro maka obere oge
Total Video ọkpụkpọ9,99
Nnukwu Foto Watermark
Anyị na-akwụsị na Nnukwu Foto Watermark, ngwa nke onye ozi ya bu tinye akara ngosi ihe oyiyi gi, ka onye ọ bụla ghara izu ha.
Ya na mbụ price bụ € 2,99 ma ugbu a ị nwere ya free maka a obere oge
Nnukwu Foto Watermark3,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Stampnote, Lifeless Planet, Total Video Player na ngwa ndị ọzọ na egwuregwu na ere maka obere oge
Egosiputara uzo nke Swift 4
Apple n'etiti ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere mmasị na nke iri nke afọ iri